Isifikile iveni yakwaMercedes ebilindelwe ngabomvu | Isolezwe
Isifikile iveni yakwaMercedes ebilindelwe ngabomvu
ezezimoto / 13 May 2018, 12:46pm / FANELESIBONGE BENGU
IMercedes-Benz X-Class esigcine ithelepkile kuleli
KUPHELILE ukulinda kubathandi bamaveni eNingizimu Afrika njengoba isigcine ithelekile iMercedes-Benz X-Class ebese kunesikhathi kubikezelwa ukuthi isendleleni kuhle kukaJesu eBhayibhelini.
Sekuphele iminyaka embalwa iMercedes yaveza ukuthi yakha le veni futhi ngaphambi kokuthi itheleke kwelengabadi, bekulokho kuvezwa imininingwane ngayo.
Ukuqala kwaleli sonto kube wukwembuleka kwekhasi elisha lale nkampani njengoba imeme abezindaba eGeorge, eWestern Cape ukuba bezobona futhi bezwe le veni abazishaya isifuba ngayo.
Kube kukhulu ukukhuluma ngayo ngenxa yobudlelwano beDaimler, eyengamele iMercedes neNissan, njengoba kube khona ukubambisana ababe nakho ekuyakheni.
Abanye balimisa ngesihloko elithi yiNavara, iveni lakwaNissan kepha eyembethe isikhumba seMercedes.
KwaMercedes nokho yize bebubonga ubudlelwano kodwa bathi yonke into bayithintile ekuhlanganiseni le moto.
Uma iX-Class uyipha amehlo ikhona inswebu yeNavara, ikakhulukazi uma usuka ngasesicabheni sangaphambili uze uyophuma ngemuva.
Ngaphambili awudingi kubuza muntu ukuthi yiMercedes ngenxa yendlela eyakhiwe ngayo, ikakhulukazi i-grille abayigaxe uphawu lwenkanyezi yodumo.
Izinhlobo efika ngazo zimbili okuyiProgressive eyakhelwe abantu abafuna iveni egolozile kodwa entofontofo futhi eyenza impilo yomshayeli ibe lula.
Uyibona ngobhampa omnyama ngaphambili futhi inyathela ngamasondo anamarimu angu-17 inch. Nesipele sesondo siwusayizi ofanayo.
Enye inhlobo yiPower, okuyiyona ephambili. Yona yakhelwe abaqhakambisa ubuhle bemoto, amandla ayo kanjalo nobuntofontofo nezinto ephuma nazo.
Igqama ngobhampa ogqize nge-chrome ngaphambili nangemuva kanjalo nakuma-fog light.
Inamarimu ahlukile angu-18 inch.
Uma ungena ngaphakathi ungafunga ukuthi usemotweni encane ngendlela ebukeka ngayo. Ngaphambili i-dashboard ayinalutho ngaphandle kwe screen, izimbobo zokukhipha umoya bese kuba amabhathini amathathu.
Ngezansi ngasegiyeni ufica izinkinobho zokulawula i-dual zone aircon nenkinobho yokuhlela ukuthi ihambe kanjani.
ICommand Online multimedia system iveza inkombandlela nesimo songwaqo futhi kwi-screen ukwazi ukuveza isiteshi ofuna ukusidlala, iDVD nokunye.
Ine-hard disk engu-80GB lapho ungakwazi khona ukulondoloza izinto zakho.
Izihlalo zakhona ziyisikhumba futhi zintofontofo. Nabagibeli bahlala ngokukhululeka njengoba i-wheelbase ingu 3 150 kanti ngemuva izihlalo zithe ukuphakama ukuze babone kahle umgwaqo ngaphambili.
Ngaphansi kwebhonethi kunenjini engu-2.3 litre kadizili ehlukene kabili. Enye yi-X220d ekhiqiza amandla angu-120 kW ne-torque engu-403 Nm. Enye yiX250d yona efuqa amandla angu-140 kW * -etorque engu-450 Nm.
I-X220d idonsa ngamasondo angemuva kanti iX250d nayo idonsa ngamasondo angemuva kodwa uma uthanda uyakwazi ukuyithola ngedonsa ngawo wonke.
I-gearbox iyi-6 speed manual kodwa uyakwazi nokuthola eyi-seven-speed automatic transmission.
Uma uyibuka ungayithatha kancane uthi yimoto yokuhamba edolobheni kuphela kodwa lo makhandakhanda ungawufaka noma yikuphi ngeke ukulalise esigangeni ngoba awusokoli.
Okwakho wukubuka lapho uhamba khona bese uyakhetha ukuthi ufuna idonse ngamsondo angemuva noma ngawo womane kodwa ibe nejubane i-4H noma ibe namandla amaningi nejubane elincane i-4L.
Ungalayisha umthwalo ongaphezulu kuka-1000kg noma udonse okunesisindo esingaphezulu kuka-3 500kg. Okuhle wukuthi zonke zifika ne-towbar.
Amadwala, isihlabathi, izindawo ezitshekile konke lapho iyazihambela. Okuyilekelelayo wukuphakama kwayo kwazise ingu-221mm. I-approach angle yayo ngu-30.1° kuthi i-departure angle ibe ngu-25.9°.
Uma wehla intaba iyakwazi ukuzehlela ihambe ngejubane elingaphansi kuka-10km/* ngaphandle kokuthi umshayeli anyathele amabhreki.
Uma unyuka ine-hill start assist ekusiza ukuthi ingahlehli.
INGAPHAKATHI le-X Class
Sithole ithube lokushayela iX250d Power eshintshwayo nezishintshayo. Igiya lokuqala kweshintshwayo lifishane kodwa linamandla ukuze uzoshesha ufike kwaphezulu bese yonga udizili.
Kwezishintshayo awuyizwa nhlobo uma usushintsha.
Emgwaqweni iwubukhosi ngoba ithule ngaphakathi, okwenza ube mncane umsindo wenjini nowangaphandle, amakhona iyawanamathela futhi ngendlela entofontofo ngayo amabhampi uwezwa ngendaba.
Kwezokuphepha ifika nezinto okubalwa kuzo ama-airbag ayisikhombisa, indawo yokufaka izihlalo zezingane ezimbili, Active Brake Assist neLane Keeping Assist nokunye.
Ezinye izinto ongakwazi ukuzifaka kuyo yiParking Package (Parktronic) nekhamera eveza imoto yonke, Comfort Package (izihlalo ezine lumbar support, izihlalo ezihlelwa ngogesi ngaphambili kanjalo namakhamava e-Artico noma iDinamica, neThermotronic automatic air-conditioner) neStyle Package eyengeza ubuhle obuhlanganisa amaLED high performance headlights, amaLED amancane ngemuva, roof rails, iwindi langemuva elivulwa ngogesi, amarimu angu-18 inch nama running boards.
Kukhona neWinter Package eyenza izihlalo zangaphambili zifudumale.
Uyakwazi ukuyigaxa nokunye njenge canopy neStyling Bar.
Yize bengafuni ukukhuluma ukuthi babheke ukudayisa amaveni amangaki ngenyanga kodwa ibukeka izobazuza abathengi hhayi kodwa njengoToyota Hilux noFord Ranger abasesicongweni. Okuzoba wumqansa nokho wukukhipha umqondo kubantu wokuthi yiNavara egaxwe uphawu lweMercedes ngoba umehluko mkhulu yize kube khona ukubambisana.
X-Class X220d 4X2 PROGRESSIVE R 642,103.00
X-Class X250d 4X2 PROGRESSIVE R 694,025.00
X-Class X250d 4X4 PROGRESSIVE R 696,785.00
X-Class X250d 4X4 POWER R 791,315.00
Amanani ngawe automatic transmission. Ifika ne-maintenance plan ka-100 000km noma iminyaka eyisithupha. Uma uthanda uyakwazi ukuyengeza ibe ngu-180 000km noma iminyaka eyisishiyagalombili.